Andro: 25 Desambra 2019
Tantara tamin'ny Channel Istanbul
Kanal Istanbul Lalana: ny rakitra fampiharana EIA an'i Kanal Istanbul, nampidirin'ny filoham-pirenena Erdoğan tamin'ny anaran'i ıyla Crazy Project ında ao amin'ny 2011, hita fa mety ary ny dingana EIA ho an'ny tetikasa dia nanomboka. Lalana 5 nanolotra teo aloha [More ...]
Konya Istanbul Fifandraisana amin'ny fiara fitateram-bahoaka haingana
Konya Istanbul Lozabe misy haingam-pandeha fiaran-dalamby ao Konya Istanbul: Manohy manatsara ny fiainantsika amin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha sy mitondra fiaran-dalamby ho an'ireo mpandeha mampiasa ny teknolojia sy maoderina rehetra ny fitaterana TCDD. [More ...]
Istanbul Ankara Sarintany momba ny hafainganam-pandeha amin'ny lalana 2020
Sarintany Lalana Hafainganam-pandeha ambony any Istanbul Ankavaky ny lalana 2020: Ny kodiaran-dàlamby avo làlan-dàlamby any Ankara Istanbul dia mijanona an'i Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze ary Pendik. Ankara [More ...]
Samsun Ordu Railway Tender nofoanana
Samsun Ordu Railway Tender nofoanana; Samsun Ordu Fikarohana momba ny lalamby sy asa amin'ny asa ho an'ny asa fanompoana, izay no dingana voalohany amin'ny TCDD ho an'ny lalamby nokasaina hananganana amin'ny lalana Samsun Çarşamba Ünye Fatsa Ordu [More ...]
Ny dingana mety amin'ny sekta Logistics
Misy fepetra lehibe natao hatao hanamafisana ny sehatry ny logistics, izay tao anatin'ny tsingerin'ny fitomboana haingana nandritra ny 10 taona. Na izany aza, ny olana lehibe izay manana ny sehatry ny logiciel tiorka [More ...]
TCDD Transportation Co. 2019-2 GCC fivoriana no natao
Ny filohan'ny Memur-Sen Kenan Çalışkan sy ny filoha lefitra İbrahim Uslu sy Mehmet Yıldırım dia nandray anjara tamin'ny TCDD Taşımacılık A.Ş. 2019/2 Fihaonamben'ny Birao mitantana ny orinasa dia tamin'ny alarobia 18 desambra. TCDD [More ...]
Ireo lahatsoratra mifandraika amin'ny Lalàna No. 2547, ireo lahatsoratra mifandraika amin'ny volavolan-dalàna momba ny Fampiroboroboana sy ny fanendrena ho an'ny mpiasa akademika izay nanatanteraka rehefa avy navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy tamin'ny daty 12.06.2018 sy ny "University Istanbul ine" [More ...]
Ankara University dia handray mpiasa staff akademika
Fampiroboroboana ny Lalànan'ny fampianarana ambaratonga ambony 2914 sy ny Lalànan'ny fampianarana ambaratonga ambony 2547 ary Staff an'ny akademika ho amin'ny toerana misokatra amin'ny sehatra akademika ao amin'ny oniversite, izay nomena anarana hoe Rektoratin'ny oniversite Ankara, ary [More ...]
IETT mametraka fandaharam-potoana fanampiny amin'ny bus mandritra ny taom-baovao
IETT dia nahavita ny fiomanana hatrizay nahaterahan'ny Taom-baovao ho an'ny Istanbulites. Hisy fiaramanidina fanampiny 22 miaraka amin'ireo fiara miisa 00 amin'ny lalana 06 eo anelanelan'ny 00: 17-125: 672 amin'ny fotoan'ny taom-baovao. Serivisy 7/24 [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan, minisitra minisitra, mpitantana foibe sy manampahefana dia nanatrika ny Logistics tao Ankara YHT Station tamin'ny 25.12.2019 [More ...]
Miaraka amin'ireo sekoly ny hopitaly Sunflower
Sakarya Metropolitan munisipaly Sunflower Bicycle Valley dia manao sonia tetikasa vaovao. Mihaona miaraka amin'ny sekoly ny tetikasa 'Sunflower Bicycle Valley izay voalamina miaraka amin'ny anaran'ny mpianatra ny fahafantarana ny bisikileta sy ny bisikileta dia hitombo. Sakarya [More ...]
Ounmamoğlu nanambara ny antony manohitra ny tetik'asa Kanal İstanbul ao amin'ny lahatsoratra 15
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanazava ny antony manohitra an'i Kanal Istanbul, izay mamaritra azy ho toy ny tetikasa famadihana miaraka amina marobe amin'ny Istanbul ede amin'ny lahatsoratra 15. Imamoglu, izay sendra ny fakantsary tao amin'ny tranobe IMM any Saraçhane, dia nilaza, ukça Niseho izany rehefa miresaka amin'ny mpahay siansa isika. [More ...]
Boğaziçi Yönetim AŞ dia nandresy tamim-pitiavana ho an'ny fampandehanana ny tobin-dalamben'i İstanbul Esenler
Ny 15 Jolay Martyrs (Esenler) fiara fitateram-bahoaka, izay fananan'ny Istanbul Metropolitan Munisipaly dia nanangana ny volavolan-dalàna. Ny mavitrika dia nandresy tamin'i Boğaziçi Yönetim A.Ş. Toerana ao amin'ny tanànan'i Istanbul [More ...]
İmamoğlu: Tokony hisakana ny tetikasan'ny Channel Istanbul ny olom-pirenena rehetra!
Ny Ben'ny tanànan'i Istanbul Metropolitan Ekrem Imamoglu, dia nanazava ny antony hiadiana amin'ny fantsom-pifandraisana an'i Istanbul tamin'ny lahatsoratra 15 no namaly ireo fanontaniana avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny mpanao gazety. Hoy ny mpanao gazety iray, nasıl Ahoana ny fiantraikan'ny fanesorana ny IMM avy ao amin'ny protokol fiaraha-miasa Kanal Istanbul? ” [More ...]